साँच्चै‌, दिनगन्ती सुरु भएकै‌ हो‌ त ? - विवेचना
साँच्चै‌, दिनगन्ती सुरु भएकै‌ हो‌ त ?
January 11, 2018 287 Views
‘अब कसै‌को‌ दिनगन्ती सुरु भो‌ जस्तो‌ छ ।’ विर‌ाटनगर‌मा कार्यर‌त एक इलामे‌ युवाले‌ आफो‌ पे‌mसबुक पे‌जमा पो‌ष्ट गर‌े‌को‌ यो‌ अभिव्यक्तिले‌ एकसाथ धे‌र‌ै‌तिर‌ निशाना साधे‌को‌ अनुभव भयो‌ ।
के‌ही दिनदे‌खि सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा सहभागी भइर‌हे‌को‌ छुइन आफै‌ व्यावहारि‌क कार‌णले‌ । त्यसै‌ले‌, हो‌ला साथीहरुले‌ फो‌नमा सो‌ध्छन्, ‘सञ्चै‌ हुनुहुन्छ नि !’ मै‌ले‌ तिनको‌ कथनमा प्रश्न चिन्ह र‌ाखिन किनभने‌ त्यो‌ प्रश्न नभएर‌ वार्ता थालनीको‌ सामाजिक शिष्ठतायुक्त अभिव्यक्ति हो‌ । उत्तर‌मा भनिदिन्छु, ‘ठीकै‌ छ, भन्नुस् किन फो‌न गर्नुभयो‌ ?’
वास्तवमा ज्यानलाई ठीक त छै‌न । रुघा लागे‌को‌ छ । मलाई हतपत रुघा लाग्दै‌न तर‌ लागे‌पछि निकै‌ सताउँछ । रुघा अरुलाई पनि लाग्छ, को‌ही औ‌षधिको‌ खो‌जीमा लाग्छन् । कसै‌ले‌ भने‌को‌ सम्झन्छु – रुघा लाग्दा औ‌षधि खाएन भने‌ सात दिनमा ठीक हुन्छ, औ‌षधि नखाएमा एक साता लाग्छ । जाडो‌को‌ याम छ । ज्यानले‌ सातौ‌ँ दशकको‌ यात्रा थाले‌को‌ छ । त्यसै‌ले‌ पनि रुघालाई हे‌लचे‌तर््mयाइँ गर्न मिले‌न । नाक बग्ने‌, ज्वर‌ांश हुने‌ जस्ता लक्षण सातदस दिनमा सकिएपछि आफाई भने‌ खो‌की सुरु हुन्छ र‌ त्यसले‌ निकै‌ सताउँछ । त्यसै‌ले‌ पनि रुघा लागे‌पछि अलिक हो‌सियार‌ हुन थाले‌को‌ छु । आफो‌ अनुभवले‌ भन्छ, आफो‌ डाक्टर‌ आपै‌mँ हुनु पर्दछ । यसको‌ अर्थ औ‌षधि पसल गएर‌ औ‌षधि किनी खाने‌ अर्थात् से‌ल्फ मे‌डिके‌सन गर‌ौ‌ँ भन्न खो‌जे‌को‌ हो‌इन । आफाई के‌ले‌ बिसाउँछ र‌ के‌ले‌ फाइदा गर्छ भन्ने‌ कुर‌ा चाहिँ आपै‌mँले‌ ख्याल गर्नुपर्छ मात्रै‌ भने‌को‌ हो‌ ।
रुघाखो‌कीमा सामान्यत: घर‌े‌लु औ‌षधि नै‌ गनेर्‌ चलन छ आफो‌ पनि । ज्वानो‌, बे‌सार‌ र‌ अदुवाको‌ झो‌ल बनाइखाने‌ । त्यसले‌ शर‌ीर‌लाई न्यानो‌ पार्दछ । नाक बग्ने‌ क्रम कम हुन्छ । दबाइ खाएको‌ छु भन्ने‌ अनुभूति पनि । तथापि कुर‌ा त उही हो‌ म्याद नपुगी रुघा ठीक हुने‌ हो‌इन । मे‌र‌ो‌ हकमा भने‌ रुघाको‌ म्याद साता दिनभन्दा अलिक बढी नै‌ हुने‌ गर्दछ । कार‌ण थाहा छै‌न, थाहा पाउने‌ प्रयास पनि गरि‌एको‌ छै‌न । भनाइ छ, बे‌लाबखत रुघा लाग्यो‌ भने‌ सिँगान, खकार‌ आदिबाट शर‌ीर‌मा भएका बिकार‌ बाहिर‌ निस्कन्छन् । तर‌ यसो‌ भने‌र‌ रुघामा पनि लापर‌बाही नगर्नु नै‌ बे‌स हुन्छ भन्ने‌सम्म बुभे‌mकै‌ हो‌ ।
सो‌मबार‌ बिहानै‌ गाउँतिर‌ गएकाले‌ समाचार‌मा अद्यावाधिक हुन सकिएन । मंगलबार‌ बिहान एक मित्रको‌ फो‌न आयो‌- है‌न, डाक्टर‌ के‌सीको‌ पक्षमा के‌ही गनेर्‌ हो‌इन ? डाक्टर‌ के‌सीले‌ सवोर्‌च्च अदालतले‌ गर‌े‌को‌ एउटा पै‌mसलाप्रति असहमति जनाउँदै‌ त्यस्तो‌ पै‌mसला गनेर्‌ प्रधानन्यायाधीशको‌ र‌ाजीनामाको‌ माग र‌ाखे‌र‌ अनशन सुरु गर‌े‌ भन्ने‌ कुर‌ासम्म सामाजिक सञ्जालबाट थाहा भएको‌ थियो‌ । उनलाई अदालतको‌ मानहानिको‌ आर‌ो‌पमा सवोर्‌च्चले‌ गिर‌फार‌ीको‌ आदे‌श दियो‌ र‌ उनी गिर‌फार‌ भए भन्ने‌ कुर‌ा तिनै‌ मित्रले‌ बताए ।
बिहान १० बजे‌ चो‌कमा भे‌ला भयौ‌ँ । मै‌ले‌ साथीहरुसँग क्षमा याचना गदैर्‌ भने‌ँ, यस विषयमा अद्यावधिक सूचना मसँग छै‌न । अदालतले‌ गर‌े‌को‌ पै‌mसलामा चित्त नबुभे‌m न्यायिक पुनर‌ावलो‌कनमा जाने‌ व्यवस्था थियो‌ हो‌ला । डा. के‌सी एक्कासि किन अनशन बस्नु भयो‌ ? सुन्छु उहाँले‌ प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध पनि के‌ही भन्नु भएको‌ छ । प्रधानन्यायधीश गलत मानिस हो‌लान् तर‌ विधिसम्मत हिसाबले‌ प्रधानन्यायधीश बनाइएपछि त उनलाई मान्नु र्पयो‌ नि ।
साथीहरुले‌ डा. के‌सीलाई गिर‌फार‌ गर‌े‌को‌, उनको‌ गिर‌फार‌ीविरुद्ध र‌ाजधानीमा विर‌ो‌ध प्रदर्शन भएको‌ कुर‌ा सुनाए । मे‌डिकल शिक्षा तथा स्वास्थ्य से‌वामा सुधार‌को‌ माग र‌ाखे‌र‌ विगतमा डा. के‌सीले‌ गर‌े‌को‌ सत्याग्रहमा अग्रस्थानमा र‌हे‌र‌ समर्थन गनेर्‌ गर‌े‌काले‌ नै‌ साथीहरुले‌ मलाई खबर‌ गर‌े‌का थिए । त्यसै‌ले‌ ‘आज एक दिन हे‌र‌े‌र‌ सबै‌ कुर‌ा बुझौ‌ँ’ भन्ने‌ मे‌र‌ो‌ आग्रहलाई साथीहरुले‌ नाइँ भन्न त सके‌नन् तर‌ त्यसमा उनीहरु खुसी थिएनन् । त्यसकार‌ण मै‌ले‌ उनीहरुलाई भने‌ँ, हे‌र्नुस् हामी यहाँ भे‌ला भएर‌ त्यस विषयमा यति सल्लाह र्गयौ‌ँ, यो‌ पनि सत्याग्रहको‌ एउटा हिस्सा हो‌ ।
त्यसपछि म सूचना संकलनतिर‌ लागे‌ँ । यसक्रममा अनलाइन सर‌लपत्रिकामा र‌ाजकुमार‌ र‌े‌ग्मीको‌ ले‌ख भे‌टे‌ँ । उनले‌ ले‌खे‌का र‌हे‌छन्, ‘डा. गो‌विन्द के‌सीले‌ अत्यन्तै‌ अमर्यादित र‌ अशो‌भनीय व्यवहार‌ गर‌े‌का छन् । सवोर्‌च्च अदालतको‌ ठाडै‌ मानहानि गर‌े‌का छन् । अनि, अदालतको‌ पै‌mसला मान्दिन, अवज्ञा गर्छु भने‌का छन् । यसो‌ भन्नु र‌ गर्नु कुनै‌ अर्थमा पनि जायज हुँदै‌ हो‌इन । न्यायाधीशलाई ठाडै‌ भ्रष्ट भन्नु अत्यन्त अशो‌भनीय काम हो‌ ।
दे‌शले‌ अहिले‌ यस्तै‌ अशो‌भनीय व्यवहार‌ गनेर्‌, यस्तै‌ नाजायज काम गनेर्‌ नायक खो‌जिर‌हे‌को‌ थियो‌ । त्यस्तो‌ नायकका रुपमा डा. के‌सी आएका छन् ।
न्यायिक क्षे‌त्रका माफियाविरुद्ध विद्रो‌ह हुनु नै‌ थियो‌ । कसै‌ न कसै‌ले‌ माफियाविरुद्ध विद्रो‌हको‌ आगो‌ झो‌स्नै‌पनेर्‌ थियो‌, डा. के‌सीले‌ झो‌सिदिएका छन् । बीचबीचमा के‌ही कालखण्डलाई छाडे‌र‌ न्यायिक क्षे‌त्रमा ‘अति’ भएको‌ थियो‌, पछिल्लो‌ कालमा ‘अतिचार‌’ नै‌ भएको‌ थियो‌ ।
आर‌म्भमा कहिले‌ पनि विद्रो‌ह शो‌भनीय दे‌खिँदै‌न । हर‌े‌क कालखण्डमा विद्रो‌हको‌ आर‌म्भ अशो‌भनीय र‌ अमर्यादित लाग्छ । विगतमा र‌ाणा शासन मुर्दावाद, पञ्चायत मुर्दावाद या र‌ाजतन्त्र मुर्दावाद भन्नु अशो‌भनीय र‌ अमर्यादित थियो‌ । डा. के‌सीले‌ कथित शो‌भा र‌ मर्यादाको‌ पर्खाल भत्काइदिएका छन् । अब जनताले‌ आफउभिएको‌ ठाउँबाट चिच्च्याउँदै‌ भन्न थाले‌का छन्, ‘भ्रष्ट न्यायाधीश मान्दै‌नौ‌ँ, न्यायको‌ खर‌ीदबिक्री मान्दै‌नौ‌ँ ।’
अशो‌भनीय र‌ अमर्यादित विद्रो‌हले‌ आकार‌ लिएपछि त्यो‌ विद्रो‌हको‌ पक्षमा उभिनु मर्यादित हुन्छ र‌ विपक्षमा उभिनु अमर्यादित हुन्छ । अब मर्यादाको‌ पक्षमा उभिने‌ कि विपक्षमा ? हर‌े‌क नागरि‌क सामु प्रश्न उपस्थित भएको‌ छ ।’ सञ्चार‌कर्मी र‌े‌ग्मीले‌ डा. के‌सीको‌ सत्याग्रहलाई एउटा क्रान्तिको‌ रुप दिए जस्तो‌ लाग्यो‌ । त्यस्तो‌ क्रान्ति जसले‌ न्यायालयलाई साँच्चै‌ न्यायको‌ मन्दिर‌ बनाउने‌ लक्ष र‌ाख्दछ । त्यस्तो‌ क्रान्ति जसले‌ न्यायालयभित्र सच्चा न्यायमूर्तिहरुलाई प्रवे‌श दिन्छ । न्यायालयले‌ त्यहाँभित्र र‌हे‌का अमर्यादित न्यायाधीशहरुका कार‌ण धे‌र‌ै‌माथि अन्याय गर‌े‌का उदाहर‌ण दे‌ख्दै‌ र‌ सुन्दै‌ आइएकै‌ हो‌ । त्यसै‌ले‌ र‌े‌ग्मीको‌ ले‌ख पढिसक्दा पंक्तिकार‌ निकै‌ उत्साहित भयो‌ ।
पर‌म्पर‌ागत रुपमा डा. के‌सीको‌ बयानले‌ अदालतको‌ अपहे‌लना गर‌े‌को‌ अनुभव गर‌ी अदालतले‌ उनलाई आफमक्ष उपस्थित गर‌ाउन चाहे‌को‌ भए पनि सम्मानजनक हिसाबले‌ उनलाई उपस्थित गर‌ाउन सकिन्थ्यो‌ । अघिल्लै‌ दिन उनलाई अनशनस्थलबाट गिर‌फार‌ गर्न आवश्यक थिएन । अझ गम्भीर‌ कुर‌ा के‌ छ भने‌ गृहमन्त्रालयको‌ जिम्मे‌वार‌ी समे‌त समाले‌का प्रधानमन्त्री दे‌उवाले‌ त्यो‌ गिर‌फार‌ीबार‌े‌ आफाई जानकार‌ी नभएको‌ जनाएका छन् । त्यसबाट प्रश्न उठ्छ यो‌ मुलुकमा सर‌कार‌ छ कि छै‌न ? र‌ाज्यका निकायहरु कहाँबाट सञ्चालित छन् ?
कुर‌ा धे‌र‌ै‌ अगाडि बढिसके‌को‌ छ । यस विषयमा धे‌र‌ै‌ टिका टिप्पणीहरु आइसके‌का छन् । यहाँ म अर्का सञ्चार‌कर्मी अरुण बर‌ालललाई साभार‌ गर्दछु । उनी ले‌ख्छन्, डा. गो‌विन्द के‌सी प्रकर‌णको‌ अब एउटा मात्रै‌ समाधान छ, प्रधानन्यायाधीश गो‌पाल पर‌ाजुलीलले‌ तत्काल र‌ाजीनामा दिने‌ । न्यायलयको‌ छवि बिग्रन नदिन र‌ अदालतप्रति जनआस्था घट्न नदिनका लागि प्रधानन्यायाधीशले‌ त्याग गर्नुबाहे‌क अब अकोर्‌ कुनै‌ विकलप दे‌खिँदै‌न । एउटा निष्ठावान जो‌गीलाई समाते‌र‌ सवोर्‌च्च अदालत फसिसक्यो‌ । अब अदालतलाई थप फस्न नदिने‌ हो‌ भने‌ प्रधानन्यायधीशले‌ बाटो‌ छाड्नुपर्छ । र‌, अदालतलाई जनतामा बदानाम हुनबाट जो‌गाउनु पर्छ ।
डा. के‌सीले‌ आर‌ो‌प लगाएजस्तो‌ गो‌पाल पर‌ाजुली दो‌षी हुन् या हो‌इनन् ? यो‌ बे‌ग्लै‌ प्रश्न हो‌ । तर‌, अब ने‌पालको‌ न्यायालयलाई जो‌गाउने‌ हो‌ भने‌ गो‌पाल पर‌ाजुलीको‌ र‌ाजीनामाबाहे‌क अकोर्‌ विकल्प दे‌खिँदै‌न । पर‌ाजुलीले‌ अब आफाई हो‌इन, ने‌पालको‌ न्यायालयलाई न्याय गर्न आवश्यक भइसके‌को‌ छ ।
अब डा. गो‌विन्द के‌सी प्रकर‌णको‌ कानुनी समाधान सम्भव छै‌न, नै‌तिक समाधान मात्रै‌ सम्भव छ । त्यो‌ भने‌को‌ प्रधानन्यायाधीश पर‌ाजुलीको‌ त्याग नै‌ हो‌ । हो‌, र‌ाजीनामापछि मानिसहरुले‌ पर‌ाजुलीलाई थप गाली गर्लान्, उनीमाथि छानबिन र‌ कार‌बाहीको‌ पनि मागसमे‌त उठ्ला । तर‌, अदालतमाथिको‌ आस्थामा जान थाले‌को‌ पहिर‌ो‌ तत्कालकै‌ लागि भए पनि थाम्न जरुर‌ी छ ।
अब डा. के‌सीलाई जे‌ल हाले‌र‌ समस्या समाधान हुँदै‌न । किनभने‌, अदालतले‌ के‌सीलाई कानुनी पर्खालभित्र थुन्न खो‌ज्दा ऊचाहिँ आपै‌mँले‌ बनाएको‌ पर्खालको‌ बन्दी बन्ने‌ खतर‌ा बढ्दो‌ छ । स्थितिको‌ गम्भीर‌ताको‌ हे‌क्का सबै‌लाई हो‌स् । न्यायधीशको‌ एक्लो‌ प्रयासले‌ मात्रै‌ न्यायलयको‌ गरि‌मा र‌ विश्वास अभिवृद्धि सम्भव हुँदै‌न, यसमा समाजका सबै‌ अवयवहरु विश्वस्त र‌ सक्रिय हुने‌ वातावर‌ण अपरि‌हार्य हुन्छ । अदालत भने‌को‌ न्यायाधीशहरुले‌ हात पार‌े‌को‌ ‘ठे‌ककापट्टा’ हो‌इन । यो‌ न्याय घर‌ हो‌ । न्यायालय हो‌ र‌ हुनुपर्छ ।
यति ले‌खिसक्दा अकोर्‌ फो‌न आयो‌ साथीहरुको‌ उल्टो‌ हिँडे‌र‌ नगर‌परि‌क्रमा गदैर्‌ विर‌ो‌ध प्रदर्शन गनेर्‌ र‌ त्यसमा सहभागी भएर‌ फर्किइ यो‌ आले‌खलाई बिट मादैर्‌छु ।
Previous भारत लैजादै गरेका २० बालबालिकाको उद्धार
Next अनसन जारी राख्ने डा. गोविन्द केसीको निर्णय